KSI Yemwana Wevadiki Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Vatambi veBasketball veAmerica
American Hollywood Nyeredzi
American Media Hunhu
American Akasanganiswa Marate Artists
American NFL Vatambi
Vezvematongerwo enyika veAmerica
American Nyanzvi Mabhokisi
Vaimbi veAmerican uye Vanyori
Vatambi veAmerica Tennis
Canadian Singer uye Vanyori
Vatambi veBritain uye Vatambi
Vaimbi veBritish Singer uye Vanyori
British Sports Hunhu
European Sports Hunhu
Nigeran Singer uye Vanyori
Latin American Sporting Hunhu
China, July 2, 2020
zvoseVatambi veBasketball veAmericaMaBillioneares eAmericaAmerican GolfersAmerican Hollywood NyeredziAmerican Media HunhuAmerican Akasanganiswa Marate ArtistsAmerican NFL VatambiVezvematongerwo enyika veAmericaAmerican Nyanzvi MabhokisiVaimbi veAmerican uye Vanyori
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 29, 2020 0
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 27, 2020 0
Melinda Anokanganisa Hutano hweVanoda Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography inopa yakazara yekufukidzwa kweMelinda Gates Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu hwemhuri, Kufambidzana Nhoroondo, Kuroora, Hupenyu hweMunhu neHupenyu. I ...
zvoseCanadian Singer uye Vanyori
Bianca Andreescu Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 26, 2020 0
CB inopa Nyaya Yakazara yemukadzi Tennis mutambi ane zita rekuti "Bibi". Yedu Bianca Andreescu Yehucheche Nyaya uye pamwe neSoldold Biography Chokwadi inounza ...
Shawn Mendes Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeCanada Celeb ane zita rekuti "Shawnito". Yedu Shawn Mendes Yevacheche Nyaya uyezve Untold Biography Chokwadi inounza iwe ...
Drake Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 15, 2020 0
CB inopa Nhoroondo Yese yeGlobal Celeb inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "OVO". Our Drake Childhood Story plus Untold Biography Facts rinounza ...
Celine Dion Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeCanada muimbi ane zita rezita rokuti "Queen Celine". Our Celine Dion Childhood Story plus Untold Biography Facts inounza ...
zvoseVatambi veBritain uye VatambiVaimbi veBritish Singer uye VanyoriBritish Sports Hunhu
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 28, 2020 0
Wentworth Miller Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 30, 2020 0
Tinokupa iwe yakazara chinyorwa cheMichael Scofield AKA Wentworth Miller Childhood Nhau, Biography, Mhuri, Musikana / Mukadzi / Gay Chokwadi, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro ...
Emma Watson Nyaya Yeucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anonzi "Em". Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheEmma Watson Childhood Nhau, Biography, Chokwadi Chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Chako ...
Lewis Capaldi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeMunhu weScotland ane zita rekuti "American Sweetheart". Yedu Lewis Capaldi Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza ...
zvoseEuropean Sports Hunhu
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 26, 2020 1
zvoseNigeran Singer uye Vanyori
Tiwa Savage Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biografia yaTiwa Savage inokupa iwe iye mufananidzo wechokwadi weNhoroondo yeHupenyu, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira. Chokwadi ...
Yemi Alade Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu vhezheni yeYemi Alade's Biography inokupa iwe nhoroondo yeUdiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Vanun'una, Hupenyu Hwehupenyu, Hupenyu uye Hwemunhu ...
Abba Kyari Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Facts
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 24, 2020 0
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheAba Kyari (Iye Marese Mukuru weVashandi) Nyaya Yehucheche, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, Mukadzi, Hupenyu Hwega ...
Sanusi Lamido Sanusi Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 2, 2020 0
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheSanusi Lamido Sanusi Hupenyu hweMwana, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, Madzimai, Mararamiro, Hupenyu hwepamwe uye humwe ...
Chinyorwa chedu chinopa chinyorwa chizere cheXi Jinping Childhood Story, Biography, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi chewanano, Hupenyu hweMunhu, Mararamiro uye Hupenyu hwemhuri. Pano, tinokunyorera iwe ...
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 1, 2020 0
Kane Williamson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNew Zealand celeb cricketer ine zita rekuti "Kiwi Kane". Yedu Kane Williamson Childhood Nhau uye Untold Biography ...
CB inopa Nhoroondo Yese yeMixed Martial Artist ine zita rezita rokuti "The Style Bender". Our Israel Adesanya Childhood Story plus Untold Biography Facts ...
zvoseLatin American Sporting Hunhu
ChildhooodBiography Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 25, 2020 0
Usain Bolt Urubhabhatidzo Mubhuku Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yekinyorwa chinonzi sprint chinonzi "Lightning Bolt". Our Usain Bolt Childhood Story plus Untold Biography Facts inounza ...
musha UNITED UMAMBO BioGRAPHY STORI KSI Yemwana Wevadiki Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
UNITED UMAMBO BioGRAPHY STORI
KSI Biography Chokwadi.
Yakapedzisira Kugadziriswa pane July 2, 2020
CB inopa Nyaya Yakazara yehunhu hweBritain yewebhu ine zita chairo "Olajide William Olatunji". Yedu KSI Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuyerera kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwega, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekuseka kwake zvisizvo pamavhidhiyo eWideo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezve KSI's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
KSI Upenyu hwepakutanga uye Yemhuri Yepashure:
Kutanga kubva Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji anonyanya kuzivikanwa saKSI akazvarwa pazuva re19th reJune 1993 kuLondon kuEngland. Ndiye wekutanga pavana vaviri akazvarwa kuna amai vake, Yinka Olatunji uye baba vake, Jide Olatunji.
Nyika yeBritain yerudzi rwevatema ine maNigerian midzi yakakurira mumhuri yepakati mhuri yepamberi pamaguta eWatford muSouth England kwaakakurira pamwe nemunun'una wake, Deji Olatunji.
Kukura muWatford, mudiki KSI aive mwana akagwinya ainyatsochengetwa nevabereki vake vaishanda nesimba. Ivo havana kungopa KSI hupenyu hwepakutanga hwehupenyu asi vakamugadza zvakanaka kuti zvinhu zvikuru zviuye.
KSI Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Chikamu chakanaka chechinzvimbo chakadai chaive kudzidza kweKSI kuBerkhamsted Chikoro, nzvimbo inobhadhara payakasununguka payakashanda muzvidzidzo uye ikaita hushamwari nevezera saSimon Minter uyo akazove chikamu chekusimuka kwake kuti ave mukurumbira nyaya.
Pakazosvika nguva iyo KSI yaibhuya yaive nemakore gumi nemashanu muna 15, akange atove nehukama hwekuita mavhidhiyo. Akafemerwa kunyoresa account yake yekutanga paYouTube pasi pezita 'JideJunior' uye akazadza chiteshi nemavhidhiyo eiye achitamba "FIFA 2008".
KSI akaenderera mberi kuvhura chiteshi chake chazvino - KSIOlajideBT - mu2009 uye akaenderera mberi nenyaya yemutambo. Hazvina kutora nguva refu asati atanga kuwana mari ye- £ 1,500 kubva kuChannel uye pakupedzisira akadonha muChitanhatu Fomu mushure mekunge mudzidzisi wake abvuma kugashira yakaderera $ £ yeNNUMX muMahora.
KSI Yekutanga Basa rehupenyu
Makore zvawo zvaakafamba, KSI yakawedzera nzira yayo yekunyora yakakura inotevera yevanyoreri ve20,000 mu2011 pamberi payo kuiswa kwemamwe maficha e-vlog-maitiro akamuona achiwana danho rinotevera revanenge vangangoita mamirioni e1 vasati vanyorera chechipiri che2012.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti budiriro yebasa repakutanga yakanga isiri kure nezvakafungidzirwa neKSI zvekuti akashanda nesimba kusvika pakukwira kwakakwirira zvakadaro. Nekudaro, zvaakateedzera zvaakawedzera, neiyowo nhamba yeavo vaigona kutsoropodza nedutu rekugadzira.
KSI Road To Fame Nyaya:
Dutu rakauya reKSI mu2012 apo paakashoropodzwa zvakanyanya nezvekunyomba kunodzokorodza kunonzi 'kubatwa kumeso' uko kwakabata chiteshi chake pakati pe2012 ne2013. 'Kubata kumeso' kwainyanyoonekwa kuve 'trivialisation yekubatwa chibharo' nevazhinji vaidana paWhatsApp kuti vabvise KSI yeavo vakawandisa.
Asides 'chibharo-kumeso, KSI akaverengerwa mhosva dzekusagadzikana pane zvaakaita pachiitiko che2013 Eurogamer kwaaipomedzerwa kuve abata nehasha nevanoshungurudza vashandi nevanopinda. Dutu racho rakanyanyisa kuMicrosoft iyo yakamutsigira rutsigiro rwayo neKSI ichisiya iyo X -UMX-makore-ekuzvarira kwemazuva apo angagona kududzira R-kelly's "Dutu rapfuura".
KSI Rise To Mukurumbira Nyaya:
Achienderera mberi, KSI akadaidzira ruregerero kwenguva zhinji dzaakakundikana kuve yehunhu hwake hwakanakisa ndokuenderera mberi nekubatana ne6 British YouTubers: Vikram Barn, Josh Bradley, Tobi Brown, Harry Lewis, Simon Minter naEthan Payne mukugadzira boka vagadziri vanonzi The Sidemen. Zviitiko zveThe Sidemen zvakatenderera pamhepo kugadzirwa kwevhidhiyo pamhepo zvakanyanya matambudziko, sketches, vhidhiyo-mutambo mutambo uye kutengesa kwega yeSidemen kutengesa. Mushure mekusanganisa mukurumbira wake neThe Sidemen, KSI yakawedzera tende yake yekusiya mucherechedzo mumumhanzi-mimiriri nekusunungura rwiyo rwake rweRwiyo "Lamborghini".
Akaburitsawo EP "Chengetedza" iyo yakakwira nhamba 1 paUK R&B Albums Chart mu2015. Nekukurumidza mberi kusvika kunguva yekunyora KSI mutambi wetsiva uyo anozivikanwa nekupayona mutambo wetsiva pakati peyeredzi dzeYouTube. Hondo yake yekutanga yeamateur yaive yekurwisana naJoe Weller uyo akauchonya kunze mu2017. Kurwira kwake kwakatevera kwaive kurwa neAmerican YouTuber Logan Paul munaFebruary 2018 naNovember 2019. Yekutanga yaive hondo yeamateur iyo yakaguma mune dhizaini iyo yekupedzisira iri nyanzvi cruiserweight rematch yakaona KSI ichikunda Logan mumutambo wechitanhatu. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
KSI Hukama Hupenyu:
Taura nezvehupenyu hwerudo rweKSI, ari muukama panguva yekunyora uye haasati akaroora munguva yakapfuura. Kutanga nenhoroondo yaKSI yekufambidzana, akatanga kudanana murudo newavo YouTuber akatendeuka musikana - Seana Cuthbert. Uko kwavo hwaive hukama hwakagara pakati pe2012-2014 vasati vaenda nenzira dzakasiyana naSeana kuratidza kuti KSI yakanga isina nguva yehukama.
Chokwadi, KSI yakanga isina nguva yekutamba kwakasimba kworudo sezvaakaramba achidanana nemumwe Lois Sharpie asati arasika pane radar ye hookups kwenguva yakareba. Iyo YouTuber isina mwanakomana (kana) mwanasikana / murume / murume kunze kwemuchato anga ari muukama neBritish Personality Nia Pickering kubvira 2018. Isu tinotarisira kuti Nia aizove mukadzi waKSI uye amai vevana vake munguva pfupi iri kutevera.
KSI Hupenyu hwemhuri:
YouTubers inozivikanwa kuva hombe pamhuri uye KSI haina mutsauko. Isu tinotaura chokwadi nezveupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaKSI:
Jide Olatunji ndibaba vaKSI. Iye anobva kuNigeria kubva kumhuri yakabva mhuri iyo yakateedzerwa kune veYoruba vanotaura vanhu kuIbadan muOyo nyika yeNigeria. Jide haana kufara nesarudzo yaKSI yekubaira vadzidzi pamusoro peatari yekugadzirwa kwevhidhiyo asi zvakadaro zvakamutsigira uye ave kudada nemabatiro awakaita iwe YouTube wakachinja pfuma yemhuri. Iyo baba inodada inoisa mumazhinji emavhidhiyo eKSI uye inochengeta mabheji ezviitiko muhupenyu hwomwanakomana wake uye hwakavanzika.
Pamusoro paamai vaKSI:
Yinka Olatunji ndiamai vaKSI. Akazvarwa uye akakurira kuIslington kuUK kuvabereki vekuNigeria. Amai vevaviri vanowanzoita mutambo weGervinho bvudzi nekunyemwerera kwakawanda kunopa ruzivo rwekusimudzira kweKSI kufara. Yinka akafanana nemurume wake padyo neKSI iye yaanopa rutsigiro rusina tsarukano. Asides anoratidzwa mune mamwe emavhidhiyo eKSI anoisa kuoneka mumitambo yake yemabhokisi uye akaonekwa nguva pfupi yadarika kunzvimbo yekutandarira kwemwanakomana wake naLogan Paul.
Nezve hama dzaKSI:
KSI haina hanzvadzi asi mukoma mudiki anozivikanwa saDeji Olatunji. Kufanana neKSI, Deji iri mune yevhidhiyo Youtube vhidhiyo. Kutevera nhanho dzeKSI, Deji akagadzira yake Amateur boxing debut mukupererwa kwekuedza kurwisa Logan Paul mudiki Jake. Deji dzimwe nguva ane hukama hunonakidza neKSI, asi kwete zvinoshamisa kuti vatyore hukama hwavo hwehukama sezvo vanogara vachiwana chikonzero chekugadzirisa mafeni.
Nezve hama dzeKSI:
Kure neupenyu kubva kwemhuri kweKSI, kwete zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pababamukuru vake amai vake nasekuru naambuya nasekuru vake. Zvimwechetezvo, vanababamunini vake, babamunini, babamunini, vazukuru uye nanasekuru havazivikanwe.
Kune vanhu vashoma vanoziva nezvehunhu hweKSI kupfuura iye Youtube uye kurwisa kwetsiva uye iwe wave kuda kuverengerwa pakati pe 'vashoma'. Gara kumashure apo patino vhura chokwadi nezve KSI's persona iyo inonyanya kutsanangurwa neGemini zodiac maitiro.
Iye ane rudo, ane moyo wakanaka, anofarira mabasa mazhinji uye zvine mwero anoratidza zvakawanda nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Zvinofarira zveKSI uye zvekuseredza zvinosanganisira kutamba, vlogging, kutamba mitambo yemavhidhiyo, kuona mafirimu, kufamba uye kupedza nguva aine shamwari nehama.
Iwe unoziva here kuti KSI ine huwandu hunofungidzirwa hwemadhora 20m panguva yekunyora? Kupfuma kwake kuri kuramba kuchikwira vane masosi avo mukuwanikwa kwake kweYouTube, mabasa emamuvhi, zvinyorwa zvebhuku uye zvimwe nguva pfupi yadarika, kuronga kwake kwetsiva.
Saka nekudaro, KSI haina matambudziko nekushandisa yakakura sezvinoonekwa mune yake ine shanje ye £ 390k madhaimani yakarukwa Beerus keteni. Chiizve? iye anogara mune inozivikanwa zvishoma imba yakasarudzika iyo inoshanda seyake kumba kune yake £ 400k motokari kuunganidzira iyo inodakadza nekutasva segwai seLamborghini Aventador yakaputirwa mumitsara yeTron pamwe neLamborghini Huracan.
KSI Untold Chokwadi:
Kuputira yedu KSI yehucheche nyaya uye biography isu tinopa zvishoma kana zvishoma zvinozivikanwa chokwadi nezveYeTuber nechinangwa chekukubatsira iwe kuti utore mufananidzo wake.
KSI munhu asingazivi. Ndokunge, haatendi kana kubvumidza kuvepo kwamwari. Maitiro aKSI pamusoro pechinamato anogona kunge asiri kuwirirana neavo emhuri yake kunyanya amai vake avo vakarererwa muCatholic.
KSI inongori matatu matatu panguva yekunyora, Iwo ma tatto ari mazwi anogona kuwanikwa pachipfuva chake (Ziva), ruoko rworuboshwe (Simba) & kurudyi ruoko (Kutendeka) inotsanangura izvo chaizvo zvinomirirwa ne “KSI”. Vanoitawo zvakare kukwirira kwake kunoshamisa kwe 6 tsoka 0 inches mairi padhuze nekuwona kwakanyanya.
Kunwa uye Kusvuta:
Kunyangwe KSI isati yaonekwa ichisvuta, akamboreurura kuputa sora muvhidhiyo. Kana iye haana kuonekwa achinwa zvinwiwa zvinonwiwa nekuti iye anofarira zvinwiwa zvine simba kunyanya G-Fuel.
Thanks for reading vedu KSI Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Feature Image Unhu: "Chirungu: "KSI panguva yehurukuro neMTV International." Mufananidzo wakatorwa na MTV Nyika dzese inobvumidzwa pasi CC BY-SA 3.0. Iyi faira ine mufananidzo unobviswa wakanzi: Faira: KSI2019.jpg.
Yeudiki Biography Diary- yeVANYAYA
Boris Johnson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Theresa May Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: June 30, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 1, 2020
Rory McIlroy Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: June 25, 2020
Adele Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts
Ed Sheeran Zvekuchecheredza Nyaya Yezve Untold Biography Chokwadi